Kugxekwa inkulumo kaNala ngokhuvethe - Ilanga News
Home Izindaba Kugxekwa inkulumo kaNala ngokhuvethe
Kugxekwa inkulumo kaNala ngokhuvethe
kuthiwa ubetshela abazalwane ukuthi bangayi ukuyogoma
UMfu Hamilton “HQ” Nala weWorld of Plenty Church, inkulumo yakhe egxekwa wumnyango wezempilo ngokudukisa abantu.
UZWAKALISE ukushaqeka nokudumala uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, ngezinkulumo zomfundisi odume ngezimanga eThekwini, ozwakala kwisithombemnyakazo (video) enxenxa amalungu ebandla lakhe, ukuba angalugomeli ukhuvethe, ethi uma enza kanjalo kuyobe kusho ukuthi kawamkholwa uthixo.
UMfu Hamilton “HQ” Nala weWorld of Plenty Church, ozibiza ngeNkosi yomNala okungamalungu ebandla lakhe ubonakala ethula inkulumo athi wayenza ngenyanga edlule egubha iminyaka ewu-58 yokuzalwa, ethi amalungu ebandla lakhe mawangazixaki ngokugoma ngoba yikhona okuzokwenza abe nokhuvethe.
“Nganitshela ngokhuvethe lungakafiki, nganitshela futhi ukuthi kayikho into yalo kodwa nizoluthola uma senijovile. Ngicela ukubuza ukuthi aphi amanga ami?
“Akekho umuntu ongumNala, ngaphandle koyigwala nongangikholwa kahle, ozojovela le nto okuthiwa yiCorona,” kusho uMfu Nala kulesi sithombemnyakazo kunanela inhlokomo yabazalwane.
UMnu Ntokozo Maphisa okhulumela umnyango, othintwe yiLANGA ngalolu daba, uthe baningi abantu abangaluqondi ukhuvethe nemigomo yalo. “Ngakho ke kuba elikhulu ishwa uma kuzoba nabantu abathathwa njengabaholi abahamba befafaza amahemuhemu nezinkoleloze ngalesi sifo esiwumbulalazwe, nesingahaqa noma ngubani, ngisho nabo imbala ngoba bazodukisa futhi babulalise abantu.
“Siwuhulumeni sisebenza ngokubambisana nabamabandla nezinye izinhlaka zomphakathi ekulweni nalesi sifo, ngakhoke siyabanxusa bonke abangenalo ulwazi olwanele ngalesi sifo nomgomo, ukuba baphumele eshashalazini, sibafundise ukuze badlulisele emphakathini ulwazi oluyilo,” kusho uMnu Maphisa.
Le nkulumo kayithunukanga umnyango kuphela. UMfu Zamokwakhe “Bhaka” Nzama we-Ekuphileni Power of King Bhaka’s God Ministries naye ozibiza ngenkosi uqophe esakhe isithombemnyakazo, eshiya angalazi kuMfu Nala.
Ekhuluma kwesakhe isithombemnyakazo uMfu Nzama, uthe: “Ngisho labo abathi bangamakhosi abatshela abantu ukuba bangajovi, uyinkosi ewur… uma uthi abantu mabangajovi ube umhlaba wonke ujova, wena wedwa uthi abantu mabangajovi.
“Uqonde ukuthi kwenzekeni empilweni yalaba bantu othi mabangajovi?
“Khuluma iqiniso, uma kuwukuthi uthwele ngokuthi abantu mabafe, sitshele phela ukuthi uthwele. Akekho umuntu obona lesi simo esinzima kangaka esibhekene naso ongathi abantu mabangajovi,” kusho uMfu Nzama.
Ekhuluma neLANGA uMfu Nala, uthe konke lokhu ayekusho kulesi sithombemnyakazo, usamile kukhona, ngoba uyakholwa wukuthi abantu bagonyiswa ngento engelaphi, kepha mhla kwathiwa lo mjovo uyelapha futhi uvikele ukuthi ogomile angabe esatheleleka, uyobavumela abamlandelayo ukuba bagome.
“Kangilwi neSayensi noma nemithi, kwamina nje nomndeni wami sinaye udokotela. Engingakufuni wukuthi kudlalwe ngabantu bagonyiswe ngento engeke ize ibelaphe,” kusho yena.
Mayelana nesithombemnyakazo sikaMfu Nzama, uthe ngoba akamazi ngisho nokumazi, uyamxolela ngalokhu akusho ngaye.
“Naye uma engazinika isikhathi ayilalele kahle nje inkulumo yami, mhlawumbe angashintsha umqondo. Kungani lingekho ikhambi elelapha umdlavuza noma ingculaza kodwa ngokukhulu ukushesha sekunomgomo wokhuvethe?
“Mhla kwathiwa lo mjovo uyelapha, yilapho nami ngiyowa-khulula amalungu ebandla lami ukuba ajove,” kusho yena.
Uthe uMfu Nzama uyisiwula uma kuwukuthi naye akayiboni le nto ayishoyo yokuthi akukabi yikhambi leli, kodwa kusadla-lwa ngabantu.
UMfu Nzama uthe yena aka-jwayele ukuphawula ezinkundleni zokuxhumana, kodwa uphawule ngoba lesi sifo sithinta bonke abantu baseNingizimu Afrika.
“Kunabantu abalahlekelwe yimisebenzi abanye bashona ngenxa yalesi sifo. Kuyangethu-sa ukuthi kunomuntu ongakhuluma budedengu kanje, athi abantu mabangagomi.
“Okungiphatha kabi kakhulu, wukuthi bakhona abantu abazoyikholwa le nto ayishoyo, bahlale bangayi ukuyogoma,” kusho yena.
Previous articleBasongelwa ngesibhaxu abelaphi bendabuko
Next articleUphenduke umkhosi womhlanga “umemulo” wentombi nto (70)